မဒေါင်းလုပ် VPN မဆော့ဝဲ မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် VPN မဆော့ဝဲ
Warp VPN 1.1.1.1 သည် Windows PC များအတွက်အခမဲ့ VPN ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ Cloudflare မှတီထွင်ထားသောအခမဲ့ VPN အက်ပလီကေးရှင်း 1.1.1.1 ကို Android နှင့် iOS အတွက် ၀ င်းဒိုး ၁၀ နှင့်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာအတွက်အခမဲ့ VPN ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်ရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်သည် Cloudflare Warp VPN ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ Cloudflare Warp VPN ကို...
AVG Secure VPN သည် Windows PC (ကွန်ပျူတာ) အတွက်အခမဲ့ VPN software ဖြစ်သည်။ သင်၏ WiFi ကွန်ယက်ကိုကာကွယ်ရန်အမည်မသိစွာရှာဖွေရန် AVG VPN ကိုယခုသွင်းပါ။ AVG Secure VPN သို့မဟုတ် AVG VPN သည် Windows PC၊ Mac ကွန်ပျူတာ၊ Android ဖုန်းနှင့် iPhone သုံးစွဲသူများအတွက်အခမဲ့ VPN program တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ WiFi...
DotVPN သည် Google Chrome အသုံးပြုသူများ၏အများဆုံး VPN extension များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံမှ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ VPN သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများပေါ်ရှိပေါ်လာသောနှင့်ထင်ရှားသောနဖူးစည်းစာတန်းများအပါအဝင်အွန်လိုင်း privacy ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ကြော်ငြာအမျိုးမျိုးမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သင်နှစ် ဦး...
Keepsolid VPN Unlimited သည်အသုံးပြုသူများအားပိတ်ဆို့ထားသောဝက်ဆိုက်များအားကြည့်။ အင်တာနက်ကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည့် VPN ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ VPN download တစ်ခုအနေဖြင့်သင်ရယူနိုင်သောပရိုဂရမ်၏ကျေးဇူးကြောင့်အင်တာနက်ကိုလွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ VPN Unlimited ကို Install လုပ်နည်း။ VPN Unlimited ကို အသုံးပြု၍...
NordVPN သည် Windows အသုံးပြုသူများအတွက်မြန်ဆန်လုံခြုံသော VPN ပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံခြုံသောကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြော်ငြာပိတ်ခြင်း၊ အကန့်အသတ်မရှိသော VPN bandwidth၊ စစ်တပ်အဆင့် encryption protocols များ၊ P2P sharing ကဲ့သို့သောကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သော VPN program သည် ၇ ရက်အခမဲ့အစမ်းကာလကိုပေးသည်။ NordVPN...
Kaspersky Total Security သည်အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အရှိဆုံးသောလုံခြုံရေးအစုံဖြစ်သည်။ Multi-device မိသားစုလုံခြုံရေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ ransomware ကာကွယ်မှု၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာလုံခြုံရေး၊ စကားဝှက်မန်နေဂျာ၊ VPN နှင့်နည်းပညာ ၈၇ ခုလုံးသည်လိုင်စင်တစ်ခုတည်းတွင်ရှိသည်။ သင်၏မိသားစုနှင့်ကလေးများကို ransomware...
CyberGhost VPN သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်အားအမည်ဝှက်ဖြင့်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့် VPN အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အစီအစဉ်၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်တားမြစ်ခြင်းနှင့်တားမြစ်ခြင်းများမပြုလုပ်ဘဲသင်လိုချင်သည့် ၀...
Kaspersky Internet Security 2021 သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ တီကောင်များ၊ စပိုင်ဝဲများ၊ Kaspersky VPN နှင့်လည်းသင်၏ဓာတ်ပုံများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဘဏ်အချက်အလက်များကိုဟက်ကာများလက်လှမ်းမမီနိုင်အောင်သင် browsing လုပ်ဆောင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ Kaspersky Internet Security အခမဲ့စမ်းသပ်မှုတွင် Kaspersky Safe Kids, Kaspersky VPN Secure Connection...
Opera GX သည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောပထမဆုံးအင်တာနက် browser ဖြစ်သည်။ Opera ဘရောက်ဇာ၏အထူးထုတ်ဝေမှုဖြစ်သော Opera GX တွင်သင်ကစားခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတို့တွင်အကျိုးအရှိဆုံးကူညီရန်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ Opera GX ကို Download လုပ်ပါ သင်သည် browser မှတစ်ဆင့် RAM နှင့် CPU အသုံးပြုမှုကိုစစ်ဆေးနိုင်ရုံသာမက memory နှင့်...
VeePN သည်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုမြန်ဆန်စွာမြန်ဆန်စွာလုံခြုံစိတ်ချရသော VPN program တစ်ခုဖြစ်သည်။ DNS ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ အကန့်အသတ်မရှိ bandwidth နှင့် speed၊ အကန့်အသတ်မရှိ server server switching၊ စစ်တပ်အဆင့်စာဝှက်ခြင်း၊ VPN protocol များ၊ မူဝါဒအ logs နှင့် Switch Kill ။ ...
Betternet VPN ပရိုဂရမ်သည် Windows operating system ရှိ PC အသုံးပြုသူများအားအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အကန့်အသတ်မဲ့ VPN အတွေ့အကြုံကိုရရှိစေရန်ကူညီပေးသည့်ကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်းမှကမ်းလှမ်းသော VPN ၀...
OpenVPN application သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်အခမဲ့ VPN application ဖြစ်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်သူတို့၏လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုကာကွယ်လိုသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိသုံးစွဲသူများအားပိတ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ င်ရောက်လိုသူများကပိုနှစ်သက်သည်။ ပရိုဂရမ်တွင်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည့် SSL VPN ၀ န်ဆောင်မှုရှိပြီးအမျိုးမျိုးသော...
UFO VPN သည် Windows PC အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ VPN ပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူသန်း ၂၀ နှင့် # 1 အခမဲ့ VPN ၀ န်ဆောင်မှု UFO VPN ဖြင့်သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပြီးအများသုံး WiFi ကွန်ယက်များတွင်အမည်မဖော်လိုပါ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးသို့ဝင်ရောက်၊...
AVG Secure Browser သည်မြန်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောအင်တာနက် browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ incognito mode၊ သာမန်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများတွင် incognito mode မပါ ၀ င်သည့် AVG Browser သည်ကြော်ငြာများကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ HTTPS encryption အသုံးပြုခြင်း၊ ခြေရာခံ scripts များကာကွယ်ခြင်း၊ လက်ဗွေရာဖုံးကွယ်ခြင်းကို Windows, Mac နှင့် Android...
Kaspersky Secure Connection သည် Windows PC အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသုံးနိုင်သော VPN program တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်လအခမဲ့သင်သုံးနိုင်သော VPN ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပိတ်ထားသောဆိုဒ်များသို့ ၀ င်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်၏အွန်လိုင်း privacy၊ အချက်အလက်၊ မက်ဆေ့ခ်ျများကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် VPN...
AdGuard VPN သည် Google Chrome အတွက် VPN extension ဖြစ်သည်။ ၀ င်းဒိုးပီစီ၊ အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများပေါ်တွင် AdGuard, အများဆုံးကူးယူထားသောပိတ်ဆို့ခြင်း application ကိုဖန်တီးသူများပိုင်သော VPN ပရိုဂရမ်ဖြင့်အင်တာနက်ကိုအမည်ဝှက်နှင့်လွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အထက်ရှိ AdGuard VPN Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ VPN extension ကိုသင်၏ Chrome...
Hotspot Shield သည်အင်အားကောင်းသော proxy ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးအပိုဆော့ဖ်ဝဲမလိုအပ်ဘဲတားမြစ်ထားသောဆိုဒ်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ Hotspot Shield သည် VPN အခြေခံ software တစ်ခုဖြစ်သည်။...
hide.me VPN ကို download လုပ်ပါ hide.me VPN သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးမြန်ဆန်သော VPN ပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အားဝဘ်ဆိုက်အားအမည်ဝှက်။ လုံခြုံစွာဝင်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အာရှ၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကရှိနေရာပေါင်း ၅၆ ခုနှင့်ဆာဗာ ၁၄၀၀ ဖြင့် VPN ပရိုဂရမ်ဖြင့်သင်သည် Wikipedia ကဲ့သို့သောပိတ်ထားသောဆိုဒ်များကိုလွယ်ကူစွာကြည့်နိုင်ပြီး YouTube နှင့်...
မွတ္စု: ProtonVPN service ကိုအသုံးပြုရန်ဤလိပ်စာတွင်အခမဲ့သုံးစွဲသူအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ https://account.protonvpn.com/signup စာမျက်နှာပေါ်ရှိအခမဲ့အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့အတည်ပြုကုဒ်ပို့ရန် ပို့ရန်”...
RusVPN သည်သင် Windows PC၊ ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ modem နှင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအမြန်ဆုံး VPN ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အင်တာနက်ကိုအမည်ဝှက်စွာကြည့်ရှုခြင်း (သင်၏ IP လိပ်စာကိုဖုံးကွယ်ထားရန်) သင်အသုံးပြုနိုင်သော VPN...
Zenmate သည်သင်၏ desktop ကွန်ပျူတာများနှင့် Google Chrome, Mozilla Firefox နှင့် Opera ကဲ့သို့သောဘရောက်ဇာနှစ်ခုလုံးတွင် add-on တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သောကမ္ဘာပေါ်တွင်အနှစ်သက်ဆုံး VPN ပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ZenMate ဆိုသည်မှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်၏ privacy ကိုကာကွယ်နေစဉ်တားမြစ်ထားသော site...
Avast AntiTrack သည်သင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ခြေရာခံပြီးသက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများပေါ်ထွက်လာစေသော tracker blocking program တစ်ခုဖြစ်သည်။ Avast AntiTrack Premium သည်နောက်ဆုံးပေါ်အွန်လိုင်းခြေရာခံခြင်းနည်းစနစ်များမှကာကွယ်ရန်နှင့်သင်၏ system privacy ကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော privacy app...
Touch VPN extension ကို Google Chrome browser အတွက်တီထွင်ထားသောကြောင့်အင်တာနက်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲလုံခြုံစွာနှင့်လျင်မြန်စွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှု။ မရနိုင်သောအခါသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှေးကွေးသောအခါ VPN application များသည်ပထမဆုံးသတိရသည်။ Touch VPN extension ကိုသုံးနိုင်သည်။ Google Chrome...
Avast! SecureLine VPN သည်သုံးစွဲသူများအားပိတ်ပင်ထားသောဆိုဒ်များကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအမည်ဝှက်ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သော VPN program တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးဆော့ဝဲအတွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောနာမည်ကျော် Avast ။ ကုမ္ပဏီမှတီထွင်သော software သည်သင့်အားအင်တာနက်ကိုလွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုခွင့်နှင့်ပိတ်ထားသောဆိုက်များသို့ ၀...
HMA! PRO VPN (Hide My Ass VPN) သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး VPN server ကွန်ယက်ကိုပံ့ပိုးပေးသောအကောင်းဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံး VPN program ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိတ်ဆို့ထားသော / တားမြစ်ထားသောဆိုဒ်များကိုဝင်ရောက်ရန်၊ တူရကီတွင်အလုပ်မလုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်၊ အများပြည်သူသုံး Wifi အချက်များလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုသော VPN ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
AVG Secure VPN (သို့) AVG VPN သည် Windows PC၊ Mac ကွန်ပျူတာ၊ Android ဖုန်းနှင့် iPhone သုံးစွဲသူများအတွက်အခမဲ့ VPN ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ WiFi ကွန်ယက်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အင်တာနက်ကိုသီးသန့်ရှာဖွေရန်အထက်ပါ AVG VPN ဒေါင်းလုပ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ VPN ပရိုဂရမ်ကိုကူးယူပါ။ VPN ၀ န်ဆောင်မှု၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို ၇...
VPNhub သည်အရွယ်ရောက် Pornhub site ၏အခမဲ့၊ လုံခြုံ၊ မြန်၊ သီးသန့်နှင့်အကန့်အသတ်မရှိ VPN program ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အခမဲ့နှင့်အကန့်အသတ်မဲ့ bandwidth၊ ကိုယ်ပိုင်ဒေတာအကာအကွယ်၊ one-click connection, cross-platform support တို့ဖြင့်ပေါ်လွင်စေသော VPN program ကိုငါအကြံပြုပါသည်။ VPNhub သည်ပိတ်ဆို့ထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများကို ၀...
Avira Free Security Suite ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာများတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည့်ကွဲပြားသော Avira software ကိုပေါင်းစပ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လုံခြုံရေးကိရိယာများနှင့်ကွန်ပျူတာအရှိန်မြှင့်ကိရိယာများကိုစုစည်းထားသည့် package တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Avira Free Security Suite...
Avast Secure Browser ဆိုသည်မှာ Windows သုံးစွဲသူများအတွက်သီးသန့်၊ လုံခြုံ။ မြန်ဆန်သောအင်တာနက် browser ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများ၏ privacy နှင့်လုံခြုံရေးကိုထည့်သွင်းထားသည့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် privacy ကျွမ်းကျင်သူများမှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစိတ်ကြိုက် web browser တစ်ခု။ Avast Secure Browser သည် Cyber ​​Security ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော Avast မှ...
ChrisPC Free Anonymous Proxy သည်သုံးစွဲသူများအားအမည်ဝှက်ဖြင့်အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသောအသုံးပြုရလွယ်ကူသောအစွမ်းထက် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုရှာဖွေနေသောအိမ်သုံးအသုံးပြုသူများသည်အင်တာနက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာကြည့်နိုင်ရန် ChrisPC Free Anonymous Proxy ကိုအခမဲ့သုံးနိုင်သည်။ program...
အသုံးပြုသူသန်း ၁၅၀ ကျော်ရှိသော VPN ပရိုဂရမ်မာ။ သင်၏ Windows PC အတွက်အလွန်မြန်ဆန်။ စိတ်ချရသော VPN ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်သည် VPN Proxy Master ကိုအကြံပြုပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဆာဗာ ၆၀၀၀ ကျော်ကိုထောက်ပံ့သော VPN Proxy Master နှင့်အတူ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စက်ပစ္စည်း ၅ ခုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်အထောက်အပံ့မရှိသည့် ၂၄/၇...
Avast Premium Security (Multi Device) 2020 ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းအားဖြင့်သင်၏ Windows, Mac, iOS, Android နှင့်သင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးကိုကာကွယ်လိမ့်မည်။ Avast ၏အစွမ်းထက်ဆုံးလုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည့် Avast Premium Security (Multi-Device) သည်ထုတ်ကုန် ၁၀ ခုအထိကာကွယ်သည်။ Avast Premium Security (Multi-Device) သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးထက်သင်၏...
Mozilla ၏အင်တာနက်လုံခြုံမှုတွင် ဦး ဆောင်သူ Mozilla ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမြန်ဆန်သော VPN ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ Windows PC နှင့် Android ဖုန်းများအတွက် Firefox browser ၏ developer များပထမဆုံး download လုပ်ရန် VPN program သည်အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာနှင့်အလျင်အမြန်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်း၊ ဂိမ်းများနှင့်ကစားခြင်းများကိုခွင့်ပြုသည့်...
SurfEasy VPN သည် Windows PC အသုံးပြုသူများအတွက်အကြံပြုထားသောအခမဲ့ VPN ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့ထားသောပိတ်ပင်ထားသောဆိုဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်သာမက၊ အများသုံး WiFi ဟော့စပေါ့များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဝဘ်ဆိုက်အမည်ဝှက်။ ကြည့်ရှုရန်အတွက်လိုအပ်သော VPN ပရိုဂရမ်သည် Opera VPN (Gold) အသုံးပြုသူများအတွက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ SurfEasy VPN...
Avira Free Phantom VPN သည်ပိတ်ပင်ထားသောဆိုဒ်များအားအသုံးပြုသူများအားလက်တွေ့ကျကျဖြေရှင်းပေးနိုင်သော VPN ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Avira Free Phantom VPN သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလုံခြုံရေးဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပံ့ပိုးပေးသော Avira ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ထားသောမသန်စွမ်း site access access program...
PureVPN အစီအစဉ်သည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများတွင် VPN ပရိုဂရမ်များကိုရှာဖွေနေသူများအခမဲ့ကြိုးစားနိုင်သောအခမဲ့ဖြေရှင်းနည်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏လွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုနှင့်ရွေးချယ်စရာများစွာဖြင့်အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။...
Radmin VPN သည်သင့်အတွက်သီးသန့် virtual network တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သော VPN program တစ်ခုဖြစ်သည်။ Windows operating system ဖြင့်သင်၏စက်ပစ္စည်းများ၌သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဤပရိုဂရမ်နှင့်အတူ၊ ဝေးလံသောစက်များကို virtual network တစ်ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအင်တာနက်ကိုလုံလုံခြုံခြုံကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ပို၍...
360 TurboVPN သည်အင်တာနက်သုံးနေစဉ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များခိုးယူခြင်းမှကာကွယ်လိုပါကသင်သုံးနိုင်သောတားမြစ်ထားသော site access program တစ်ခုဖြစ်သည်။ 360 Total Security ကဲ့သို့၎င်း၏ဆော့ဝဲများနှင့်ငါတို့သိသော Qihoo 360 ကုမ္ပဏီမှသုံးစွဲသူများအားကမ်းလှမ်းသောဤ VPN...
Browsec VPN သည် Google Chrome နှင့် iOS ထုတ်ကုန်အသုံးပြုသူများမှအမှတ်အသားအပြည့်အစုံကိုရယူနိုင်သည့် VPN ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ VPN add-on သည်ကမ္ဘာအနှံ့တည်နေရာ ၉...
Spotflux သည်သင်ပိတ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလွယ်ကူစွာ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုသောကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်အပြင်၎င်းသည်သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ခြေရာခံခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလတ်များအားဖမ်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ program ကို install လုပ်ပြီးနောက်၎င်း၏အလွန်ရိုးရှင်းသော interface...
X-Proxy သည် IP ဖုံးကွယ်ဆော့ဝဲများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထဲပေါ်လာသောပထမဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်ရှာဖွေရန်၊ သင်၏ IP လိပ်စာကိုပြောင်းပါ၊ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားခိုးယူခြင်းနှင့် proxy IP server များသုံးခြင်းဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။ X-Proxy ကို download လုပ်ပါမင်း website ကို ၀...
Hideman VPN သည် သင့်အားအင်တာနက်ကို ဘေးကင်းကင်းနှင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှာဖွေခွင့်ပြုသည့် အသုံးဝင်သော VPN ပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ပြီးနောက်၊ သင်၏ IP လိပ်စာကို အလိုအလျောက် ဝှက်ထားခြင်းဖြင့် သင်၏အထောက်အထားကို မဖော်ပြဘဲ အင်တာနက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ VPN ပရိုဂရမ်များသည် သင်အသုံးပြုသည့် IP လိပ်စာကို ဝှက်ထားခြင်းဖြင့်...
Shellfire VPN သည် သုံးစွဲသူများအား YouTube ကဲ့သို့ ပိတ်ဆို့ထားသော ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက်ကာ အမည်ဝှက်ဖြင့် ရှာဖွေခွင့်ပြုသည့် လုံးဝအခမဲ့ VPN ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ VPN ဟုအမည်ရသည့် Virtual Private Network - Virtual Private Network ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် သင့်အင်တာနက်အသွားအလာကို အခြားသော IP နံပါတ်သို့ လမ်းကြောင်းပေးခြင်းနှင့် ဤ IP မှ...
My Fast VPN သည် သုံးစွဲသူများအား ပိတ်ဆို့ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အမည်မသိဖြင့် ရှာဖွေကြည့်ရှုရန် ကူညီပေးသည့် VPN ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ VPN ဝန်ဆောင်မှုများသည် အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာမှ ထွက်နေသောအင်တာနက်အသွားအလာကိုယူကာ အခြားပထဝီဝင်တည်နေရာများရှိ...
SoftEther VPN + VPN Gate Client သည် သုံးစွဲသူများအား အခမဲ့အင်တာနက်ကို အမည်ဝှက်ဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ပြီး ပိတ်ဆို့ထားသောဆိုက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည့် VPN ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူလက ဂျပန်နိုင်ငံ Tsukaba တက္ကသိုလ်မှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားပြီး၊ ဤ VPN ဝန်ဆောင်မှုသည် SoftEther VPN ပရိုဂရမ်နှင့် VPN Gate...